( သည်ဆောင်းဟေမန် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( သည်ဆောင်းဟေမန် )	11
( သည်ဆောင်းဟေမန် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Dec 12, 2014 in Creative Writing, Poetry | 11 comments
ဤမျှလေလား ဆောင်းဟေမန် ။
ခင်ဇော် says: ချမ်းပါတယ်ဆိုကွယ်
တောင်ပေါ်သား says: ဒီမှာဖြင့် ပူတာာာာာာာ
ခင် ခ says: ကီးမမှန်တဲ့ ဒီဘ၀
တောင်ပေါ်သား says: သားတော်မောင်နဲ့တော့ မသွားချင်ပေါင်
ဟေမန်လေးနဲ့ဆို တော်သေး ဟေး ဟေး ဟေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အံမယ် ဒီကဗျာ ဒီတစ်ခါတော့
စကားးလုံးပြတိုက် အမှတ် ၂ ကို အခုထိ စ မကိုင်ရသေးတာ
ဖားသက်ပြင်း says: ဖက်ကြမ်းယီးနဲ့ ဂေါ်သဗျာ…
တောင်ပေါ်သား says: အနော်က ဘော့ဖွာတဲ့ ဘဝသမားလေးပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: အေးရင် စိတ်ညစ်တတ်ပေမယ့်.. ဆောင်းတွင်းက မအေးတဲ့အခါကျတော့လည်း အေးကို လွမ်းသလိုလို.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အေး ကိုလား ၊ အံ ကိုလား မှန်မှန်ပြောစမ်း ကောင်မလေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဆောင်းတွင်းမတော့ မြောက်ပြန်လေတိုက်တာ သဘောအကျဆုံး….။ အိမ်နားမှာ…အပင်တွေများလေတော့ လေတိုက်လို့ သစ်ရွက်ကြွေရင်ဖြင့်….
တောင်ပေါ်သား says: သစ်ရွက်ကြွေတာကို ကြည့်ပြီး စိတ်ရူးထရမယ့်အရွယ် ကျော်ခဲ့တဲ့ အပျို ကြီးဖြစ်နေပြီပဲလေ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.